Cudurka Juudaanka (Leprosy) | Somali Health
Home Cudurada Cudurka Juudaanka (Leprosy)
Cudurka Juudaanka (Leprosy)
Cudurka Juudaanka, waxuu ka mid yahay cudurada faafa waxaana sababa bakteeriya loo yaqaano Mycobacterium leprae. Bakteeriya sababta juudaanka waxay si tartiib ah ugu tarantaa jirka bani’adamka. Cudurku Juudaanka wuxuu badanaa ku dhacaa maqaarka, dareemayaasha, xuubka qeybta sare ee hawo-mareenka, iyo indhaha.
Cudurka Juudaanka waxaa laga kala qaadaa dhibco yaryar ah kuwaaso ka soo baxa sanka iyo afka adigoo xiriir toos ah oo soo noqnoqda la yeesha bukaannada qaba cudurka kuwaaso aann la daaweyn.
Sanadka 2018 waxaa la diiwaan geliyay in ka badan 208, 619 bukaanno cusub oo qaba Juudaanka, sida lagu xusay warbixin laga soo aruuriyay 159 dal.
Calaamadaha cudurka waxay ka soo muuqan karaan bukaanka hal (1) sano gudahooda laakiin waxay qaadan karaan ilaa 20 sano, ama in ka badan. Calaamadaha lagu garto marka ugu horeysa waxaa ka mid ah; Nabro kasoo baxa maqaarka, murqaha daciif noqa iyo kabaabyo lagu argo gacmaha, lugaha iyo cagaha.
Mid ka mid ah calaamadaha cudurka Juudaanka
Cudurka Juudaanka waa la daaweyn karaa. Daaweyntaas waxay ka hortag u tahay waxyeelo ku timaada nudadka jirka, waxay joojinee faafitaanka cudurka, sidoo kale, waxay ka hortagtaa dhibaatooyin caafimaad oo cudurka sababa.
Haddii aan la daweyn wuxuu waxyeelleen dareemayaasha waaweyn ee xusulka, gacanta, jilibka iyo canqowga taaso horseeda in faraha gacmaha iyo cagaha aysan dareemin dabka, waxyeelada dhagaxaanta, ka dibne ey dhaawacmaan, ugu dambeyn la jaro adimada.
Dhinaca kale, cudurka juudaanka wuxuu dhaawici karaa dareemayaasha wajiga taasoo ku keenta muruqyada isha in ay joojiyaan shaqada, taasoo ugu dambeyntii horseeda indho la’aan.
Indho la’aanta waa mid ka mid dhibaatooyinga laga dhaxlo Juudaanka, haddii aan la daaweyn
Previous articleSaameynta ay Shiishaddu (HOOKAH) ku leedahay caafimaadka Aadanaha
Next articleDr. Gabgable oo ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Kanada
[Faallo] Yaa la marin-habaabin wacyigelinta bulshada ee Cudurka COVID19.
Bukaankii sedexaad (3) oo qaba cudurka COVID-19 ayaa lagu arkay Soomaaliya.
Ugandha ayaa laga helay cudurka #COVID19